DEG-DEG: Xiddiga Barcelona Ee Aubameyang Oo Ka Fadhiistay Ciyaaraha Caalamiga Ah - GOOL24.NET
DEG-DEG: Xiddiga Barcelona Ee Aubameyang Oo Ka Fadhiistay Ciyaaraha Caalamiga Ah
Weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa shaaciyey inuu si rasmi ah uga fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah, kaddib markii uu xulka qarankiisu ka hadhay Koobka Adduunka, sidoo kalena ay tartankii qaramada Afrika ee horraantii sannadkan ay meel hore kaga hadheen iyadoo uu isaguna dhaawac ahaa.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa warqad uu u diray xidhiidhka kubadda cagta ee Gabon, waxa uu ku sheegay inuu soo afjaray ciyaaraha caalamiga ah iyo 13 sannadood oo uu u ciyaarayay xulka qaranka dalkiisa oo uu u saftay 72 kulan, isla markaana uu waqtigan u ahaa kabtan.
“Kaddib 13 sannadood oo aan metelayay xulka qarankayga, waxa aan shaacinayaa in aan soo afjaray ciyaaraha caalamiga ah. Waxa aan u mahad-celinayaa dadka reer Gabon iyo dhamaan kuwii sida fiican ii taageereyay waqtiyadii adkaa. ” Ayuu Pierre-Emerick Aubameyang ku yidhi qoraalkiisa.
Waxa uu intaa kusii daray: “Xusuusihii badnaa ee wanaagsanaa ayaan kaydsan doonaa, sida maalintii aan safray kulankaygii ugu horreeyey, ama maalintii aan kasoo laabtay Nigeria aniga oo kusoo guuleystay African Ballon d’Or [abaal-marinta xiddiga Afrika].”
Waxa uu Aubameyang u mahad-celiyey aabbihii oo uu sheegay in uu siiyey damaca ah in uu shaqadiisii oo kale ku qabto.
Xiddigan hore ee Arsenal ayaa ka mid ahaa xiddigaha xulka qaranka Gabon ee sannadkan loo xulay inay ku metelaan Koobkii Qaramada Afrika, laakiin markii uu gaadhay magaalada Dubai oo ay tababarka isku-diyaarinta ku qaadanayeen ayaa uu ku dhacay COVID-19, kaddibna waxa uu xidhiidhka kubadda cagta Gabon sheegay inay laacibkan haysato dhibaato dhinaca wadna ah, sidaas ayaana dib loogu diray Arsenal ka hor intii aanay kooxdaasi fasixin ee aanu sida xorta ah ugu wareegin Barcelona.